राजनीतिक स्थिरता र कर्मचारीतन्त्र प्रतिबद्ध भए कृषिले छलाङ मार्छ / सम्बाद – Newsagro
July 24, 2016 December 12, 2016 NewsAgro0Comments Agriculture, Agriculture Online newsagro.com न्युज एग्रो डट कम, Interview संवाद, kathmandu, Moad कृषि विकास मन्त्रालय Ministry of Agriculture Development of Nepal, Nepal, Uttam kumar Vattarai
उत्तमकुमार भट्टराई सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१.६ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको मुद्दा केन्द्रीय बनेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित भएको यो क्षेत्र जनतालाई पाल्ने अर्थात् बाँच्नका लागि खाना उब्जाउने क्षेत्र पनि हो । तर, कृषिलाई हेपिएको पेशाका रूपमा समाजले लिएकाले यसतर्फ युवाको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । विगत १७ महिनादेखि कृषि विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मवारी उत्तमकुमार भट्टराईले सम्हालिरहेका छन् । १३ वर्ष निरन्तर कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरेका भट्टराई हक्की स्वभावका सचिवमा गनिन्छन् । फुड टेक र एमपीएमा स्नातकोत्तर उपाधि लिएका भट्टराई नेपालमा कृषि विकासको भविष्य निकै उज्ज्वल रहेको विश्लेषण गर्छन् । मुलुकमा कृषि विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारक मान्ने भट्टराई कर्मचारीतन्त्रमा पनि इमान्दारिताको खाँचो रहेको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि २७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अझ चर्चाको केन्द्रमा छ । चालू आवको केन्द्रीय योजना, कृषि विकासको विगत, वर्तमान तथा भविष्य, यस क्षेत्रका समस्या र समाधानको उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित सचिव भट्टराईसँग किरण आचार्यले गरेको कुराकानी :
कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा निकै चर्चामा छ । आत्मनिर्भरता नारा नै किन ?
कृषिले मुख्य गरेर दुई वटा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । एउटा प्रत्येक नेपालीको खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न काम गर्नु हो । यसमा हामीले आत्मनिर्भर कृषिको कुरा गरिरहेका छौं । आत्मनिर्भर कृषिको कुरा गर्नुको कारण अबको दिनमा विश्व निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रन सक्ने सम्भावनाका आधारमा हो । कुनै पनि बेला हामीसँग पैसा भएर पनि खाने कुरा किन्न नपाउने अवस्था आउनसक्छ । विदेशबाट किनेर ल्याएर खान्छु भन्ने कुरा अबको दिनमा भरपर्दो र दिगो हुँदैन । त्यसैले प्रत्येक नेपालीको खाद्य पोषण सुरक्षा हासिल गर्ने गरी कृषि र पशुपंक्षीको उत्पादन लक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो र आधारभूत कुरा हो । यसैमा केन्द्रित भएर कृषिको भविष्यका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसो गर्दा पनि चामल वा केही सीमित खानेकुरा मात्र भएर पनि भएन । सन्तुलित खाना हुनुपर्छ । नियमित अन्न, दलहन, माछामासु, दुग्धजन्य उत्पादन, फलफूल, सागसब्जी सबै कुरा दैनिक रूपमा सबैलाई आवश्यक पर्छ । सबैलाई सबै खाद्य समूहको आवश्यकता अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न आत्मनिर्भरताका लागि काम गर्नमै हामी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन । यस आधारमा हेर्दा हामी खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर छौं । गतवर्ष धेरै कठिनाइका बाबजुद पनि खाद्य वासलातमा त्यति नकारात्मक छैनौं । मल अभाव र मनसुन प्रतिकूल हुँदा पनि खाद्यान्न सन्तुलन हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । चालू वर्षमा मनसुन राम्रो हुँदै गएको छ, रोपाइँ राम्रो भएको छ र मलखादको वितरण पनि राम्रो भएकाले हामी तीन वर्षअघिकै तुलनामा ५० लाख टन बढी धान उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।
समग्रमा हेर्दा सागसब्जी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा सबैमा उत्पादन वृद्धिको अवस्था निकै राम्रो छ । कृषिले एकातिर खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दछ भने अर्को कुरा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तर र स्वच्छता कायम भएको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । हामी कृषिमा दुईरतीन वर्षभित्रमा सक्षम हुन्छौं भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
अहिलेकै संरचना, बजेट, कार्यक्रम र योजनाकै आधारमा तपाईंले भनेजस्तो तीन वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य पूरा गर्ने आधार के हुन् ?
तीन वर्षभित्रमा कृषिमा आत्मनिर्भरता सम्भव छ । यसका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य शर्त हो । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा बन्द हड्तालका कारण मल वितरणमै समस्या आएको जस्तै समस्या धेरै आउन सक्छन् । यसो हुनुहुन्न । नीति निर्माता र नेता पनि अब कृषिमा हामीले लगानी गरेनौं भने विकास सम्भव छैन भन्नेमा आस्वस्त हुनुहुन्छ, यो नै पहिलो आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को आधार बजेट तथा कार्यक्रम हो । गतवर्ष कृषि र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँगै हुँदा मात्र २७ अर्ब बजेट मन्त्रालयलाई थियो भने यो वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई मात्र २७ अर्ब ४२ करोड छ । ८ अर्ब २७ करोड त पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकै छ भने सिँचाइको छुट्टै बजेट छ ।
कृषि विकासको दीर्घकालीन योजनासहितको कृषि विकास रणनीति पनि यसै वर्षदेखि लागू हुँदैछ । यसले पनि विकासका आधार निर्धारण गरेको हो । वार्षिक ५० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । कृषि, पशुंक्षी र सिँचाइसमेतको जोड्दा यो रकम त अहिलै पुगिसकेको छ । वन मन्त्रालयको पनि केही हिस्सा कृषि क्षेत्रका लागि छ । कृषि विकास रणनीतिले भनेअनुसारको बजेट लगानी गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि बहुवर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर नयाँ विशेष प्रकारका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं ।
थोरै समयको तयारीमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री योजना बढी महत्वाकांक्षी र जोखिमयुक्त देखिन्छ नि ?
हो, यो परियोजना जोखिमपूर्ण छ र हामीले जोखिम लिएकै हो । देश विकास गर्ने हो भने जोमिख लिनुपर्छ । आफ्नो लागि आफैं चुनौती खडा गर्ने र निश्चित लक्ष्य राखेरै काम गर्नुपर्छ । गर्दै जाउँ भए हुन्छ नभए हुँदैन भनेर देश विकास हुँदैन । चीन आजको विकासको चरणमा यत्तिकै पुगेको हैन । सन् ७०–८० को दशकमा कृषिमा गरेको लगानीको परिणति नै आजको चीन हो । कृषि सफल भयो भने यसले उद्योग बढाउँछ । उद्योग बढेपछि स्वतः सेवा क्षेत्र पनि बढ्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासले नै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छन् ।
दुईदेखि तीन महिनाभित्रमा नितान्त नेपालीले बनाएको योजना हो यो । हेर्दाखेरि यो महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ । तर यसले नेपालको कृषि विकासको मोडल ९प्रारूप० निर्धारण गर्छ । यसका केही चुनौती पनि छन् । जमिनको चक्लाबन्दी नगरी यान्त्रीकरण गर्न सम्भव छैन । यान्त्रीकरण नगरेर कृषि विकास सम्भव छैन । त्यसैले जमिनको चक्लाबन्दी अनिवार्य छ । चक्लाबन्दी नगरेर कृषि विकास गर्न सकिँदैन । वर्तमान अवस्थामा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि यो राजनीतिक विषय हो । तर पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जमिनको चक्लाबन्दी गर्नका लागि किसानलाई प्रोत्साहन नै मुख्य विकल्प हो ।
सहकारीको अवधारणामा जग्गा चक्लाबन्दी गर्नेलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा छ । यसले कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्छ । परियोजनाले कृषकलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा सहायता गर्नेछ । कृषकमात्र हैन कर्मचारीलाई पनि कामका लागि प्रोत्साहन गर्दैछौं । काम गरेअनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था छ । अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाइन्छ । राम्रोसँग काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई सजायँको व्यवस्था छ ।
कृषिलाई सहयोगी मानिएका कृषि सडक र सिँचाइका ठूला परियोजना पनि छन् । तर, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभावले त्यस्ता योजनाले प्रतिफल नदिएको गुनासो पनि छ नि ?
हिजो पनि हाम्रो सामान्य समन्वय थियो । त्यति प्रभावकारी नभएको हुनसक्ला । डोलिडारले गर्ने कृषि सडक र सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने सिँचाइका परियोजना छन् । तपाईंहरू हामीले भनेको ठाउँमा जानुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । अब समन्वय थप बलियो बनेको छ । पछिल्लो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तयार गर्दा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेरै काम गरेका हौं । हामीले जोन र सुपर जोनको कुरा गरेका छौं । यी क्षेत्रका विद्युत्, सिँचाइ र कृषि सडक पनि त्यसैअनुरूप पुग्ने गरी काम गर्न सबै मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । परियोजनाको बजेट पनि एकीकृत बजेट हो । कतिपय बजेट हामीलाई आउँछ अनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिनुपर्छ । एडीएसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि हामी समन्वय गरेर अगाडि बढिसकेका छौं ।
समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान मारमा छन् । यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो एकदमै ठूलो र गम्भीर विषय हो । गएको मंसिरमा झापामा १५ सय रूपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा धान बिक्री गर्नुपरेको थियो । जबकि सीमापारि २१ सय रूपैयाँ मूल्य थियो । भारतले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको र नेपालमा समर्थन मूल्य नभएकाले यस्तो समस्या देखियो । यसो हुँदा हाम्रो धान पारिपट्टी अनौपचारिक रूपमा गएर पिसानी भएर यतै आउने अवस्था छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा २०७० सालदेखि हामीले काम गरिरहेका छौं । यसमा आपूर्ति मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ किनकि खाद्य संस्थान आपूर्ति मन्त्रालयसँग छ । आपूर्ति, अर्थ र कृषि मिलेर यस पटक धान, मकै र गहुँमा समर्थन मूल्य तय गर्न सहमति भइसकेको छ ।
कृषि अनुदान, बिमा र सहुलियत ऋण प्रभावकारी नभएको आरोप छ । बाढी पहिरो पीडित कृषकका समस्या पनि मन्त्रालयले हेरेन भन्ने छ । मन्त्रालयको धारणा के हो ?
अनुदानको दुरूपयोग भयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । सतप्रतिशत त केही कुरा पनि सम्भव छैन । तर, अत्यधिक दुरूपयोग भने भएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत बर्सेनि करिब १० अर्ब अनुदान वितरण हुन्छ । ६ अर्ब रूपैयाँ उन्नत बीउ, रासायनिक मल र प्रांगारिक मल वितरणमा गइरहेको छ । किसानले तिर्ने मूल्य करिब/करिब ५० प्रतिशत त मलमा छ । यो एकदमै पारदर्शी छ । अन्य अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन हामीले जिल्ला जिल्लामा अनुदानका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । कसैले बदमासी गरेको भेटेमा कारबाही पनि गरेका छौं । आगामी दिनमा पनि अनुदानको पारदर्शिता र अनुगमनका विषयमा निकै सजग भएर काम गर्नेछौं । दैवीप्रकोपका घटनामा प्रभावित किसानलाई राहतको रूपमा केही दिने भनेर रकम विनियोजन हुन्छ । गतवर्ष पनि ३ करोड रूपैयाँ थियो । यसले राहत दिन पनि पुगेन, यो आर्थिक वर्षमा थप गर्ने योजना छ ।
बिमामा सरकारले ७५ प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । चालू वर्षमा पनि कायम छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा नपुगेर थपेका थियौं । बढ्ने क्रममा छ । यसले किसानमा उत्साह बढाएको छ । यद्यपि थप विस्तार गर्दै जानुपर्ने छ । बालीमा लगानीको आधारमा बिमा गर्ने भनेकाले केही कमी छ । प्रतिफलका आधारमा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । पशुपंक्षीमा खासै समस्या छैन । जहाँसम्म सहुलियत ऋणको कुरा छ, कतिपय बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सहुलियत दिन आनाकानी गरेको गुनासो हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ । हामीले यो कुरा अर्थ मन्त्रालयल र राष्ट्र बैंकमा पनि पु¥याएका छौं । किसानलाई सुविधा दिने कुरामा कसैले पनि सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
किसान पेन्सन र वर्गीकरणको कुरा निकै चर्चामा छ रु यस विषयमा के हुँदैछ ?
किसान वर्गीकरण गर्नु कुनै ठूलो कुरा भएन । वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । हामी गर्छौं । किसान पेन्सनको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । यसका लागि अध्ययन गर्न सूचना निकालेका छौं, कन्सल्ट्यान्टलाई आह्वान गरेका छौं । अध्ययनबाट आउने निष्कर्षका आधारमा कसरी जाने भन्ने निष्कर्ष निकालेर यो वर्षको अन्त्यसम्म भए पनि केही सुरूवात गर्छौं ।
खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य गुणस्तर पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने विषय खाद्य सुरक्षा र स्वच्छतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको विषय हो । गुण एग्रिकल्चर प्राक्टिस (ग्याप) का लागि योजना बनाउँदैछौं । त्यसैगरी ह्यास्याप, जीएमपी र आईएसओ जस्ता गुणस्तरको मापदण्डअनुसार कृषि उपजमा सुधार गर्ने योजना हाम्रो छ । उत्पादित कच्चा पदार्थदेखि प्रशोधित कृषि उपजसम्मको गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि यो वर्षमै नीतिगत काम हुन्छ ।
फार्म केन्द्र सुधार र कृषि प्रसार प्रभावकारी बजाउन के कस्ता योजना छन् ?
कृषिमा विकास नहुनुमा एउटा कारण फार्म केन्द्रहरूको क्षमता नभएर पनि हो । कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फार्मले किसानको मागको १५ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकेका छन् । हामीले फार्मलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रस्ताव तयार गरिरहेका छौं । फार्म केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी थप्ने योजना छ । नार्क र कृषि विभाग अलग अलग निकाय भएकाले समन्वयको समस्या हटाउन हामीले नार्क र विभागका विभागीय प्रमुखहरूको नियमित बैठक पनि राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
हाम्रो अहिलेको सेवा पहुँच १५ प्रतिशतमा मात्र छ । हामीसँग जनशक्ति छैन अनि कसरी प्रविधि पु¥याउनु रु त्यसैले हामीले जनशक्ति चाहिन्छ भनेका छौं । सेवा केन्द्रको संख्या हेर्ने हो भने तराईका जिल्लामा प्रतिजिल्ला ४, मध्य पहाडमा ६ र उच्च पहाडमा ४ सेवा केन्द्र मात्र छन् । प्रत्येक गाविसमा सेवा पु¥याउनुपर्छ । हामीले नयाँ जनशक्ति थप्दैछौं । विस्तारै प्रविधि विस्तारमा लाग्ने योजना छ । यी सबै काम हुने हो र राजनीतिक स्थायित्व हुने हो भने अबको १० वर्षमा कृषिमा छलाङ मार्छौं ।
१० वर्षमा छलाङ मार्न विस्तृत कार्ययोजना पनि त होला नि ?
कुन वर्षमा कस्तो कार्यक्रम गर्ने, कति लगानी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिसकिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामा पनि कुन वर्षमा कति ब्लक, पकेट क्षेत्र, जोन विस्तार गर्ने भन्ने योजना छ । सबै भन्दा ठूलो दस्तावेज एडीएस हो । यसमा १० वर्षको आन्तरिक योजना छ, योजनाअनुसार काम हुन सके दश वर्षमा हामीले ठूलै फड्को मार्न सक्छौं । व्यापार घाटा कम गर्ने, उत्पादन बढाउने, गुणस्तर सुधार्ने, निर्यात गर्ने सबै योजना बनाएरै कार्यक्रम लागू हुँदैछन् । लगानीको वातावरण बन्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । कृषिको उत्पादकत्व, सिँचाइको प्रतिशत, खाद्य सुरक्षा आदि सबै विषयमा १० वर्षे योजना निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौं ।
तपाईंको कुराले मन्त्रालयले धेरै काम गरेजस्तो देखिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन नि ?
कृषिले केही गरेन भन्ने कुरा सरासर गलत हो । आजभन्दा बीस वर्षअघि नेपालको जनसंख्या कति थियो र अहिले कति छ रु त्यतिखेर अलिक निर्यात गथ्र्यौं तर अहिले पनि हामीलाई पुग्ने अन्न मुलुकमै उत्पादन भएको छ । यत्रो जनसंख्या बढिसक्दा पनि पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन हुनु चानचुने कुरो हैन । यद्यपि गर्नुपर्ने धेरै छ । नयाँ नयाँ प्रविधिमा जानैपर्छ । हाइब्रिडमा जानैपर्छ । यसो गर्दा कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ । कृषिसँगै उद्योगहरू पनि आउँछन् । एकातिर फार्म र अर्कोतिर प्रशोधन उद्योगमा पनि रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । सेवा क्षेत्रमा पनि थप रोजगारी त हुन्छ नै । यसो गर्दा रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणसँग कृषि जोडिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएमा नेपालको भविष्य सुन्दर देखेको छु । यसका लागि हामी कर्मचारीतन्त्र पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछौं ।
← चिया प्रतिबन्ध गर्ने भारतीय ब्यापारीको चेतावनी
अनुदानको प्रांगारिक मल प्रयोग भएन →